Wararka Archives - BaravaNewsBaravaNews
You are here: Home / Wararka
War ka soo baxay Taliska Ciidamada Maraykanka ee Qaarada Africa ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu faah faahiyey duqeyn ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan Gobolka Jubbada Dhexe.
Warka ayaa lagu sheegay in iyaga oo kaashanaya dowladda Soomaaliya maalintii shalay duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen degmada Jilib oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe, islamarkaana ay la beegsadeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Weerarka ayaa Mareykanka waxa uu ku sheegay in ay ku dileen Xubin ka tirsanaa Ururka Al-shabaab , islamarkaana weerarkaas aysan waxyeelo kazoo gaarain dad rayid ah.
Mareykanka ayaa sanadkaan 2019 waxa uu kordhiyey weerarada dhinaca cirka ah uu ka fuliyo Soomaaliya,waxaana Hay’adaha u dooda Xuquuqda aadanaha ee amnesty international Warbixin ay dhawaan soo saartay ay ku eedeeyay Mareykanka in duqeynta uu Soomaaliya ka wado ay ku dhintaan dad rayid ah.
Wabiga Shabeelle ayaa saacadihii ugu danbeeyay bilaabay in uu si toos ah ugu fataho guud ahaan xaafaddaha magaalada Beledweyne, kaddib markii xalay uu qeybo badan Wabigu karkaarada jabsaday.
Laamiga dhaxmara bartamaha magaalada ayeey biyuhu bilaabeen in ay ku dulmaraan taasoo muujineysa in fatahaadu waxba ka duwaneyn kuwii ka horeeyay saameynta weyn yeeshay, gaar ahaan xaafaddihii ugu danbeeyay ee biyuhu ku fataheen ayaa waxaa ka mid ah Xaafadda Buundo-weyn, Kooshin, waxaana biyaha ka burqanaya xaafadda Buunda-weyn ay saameyn weyn gaarsiinayaan goobaha ganacsiga oo qaarkood wali ay dhax-yaallaan badeecooyinkii kala duwanaa oo ay mid yihiin raashinka.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa sheegay in dadka barakacay magaalada lagu qiyaasayo ilaa 50 kun ruux oo deegaan ka dhigtay dhulka taagga ah ee dulleedka Bari deegaanka Ceeljaale.
Korontada magaalada ayaa la jaray, iyadoo shirkaduhu ka cabsi qabaan in ay wax-yeelo u geysto dadka biyaha ku dhax-lugeynaya madaama baalayaasha Korontada gudbiya intooda badan suran yihiin xaafaddaha fatahaadu saameysay.
Magaalada Beledweyne ayaa sanad waliba dadka ku dhaqan xiliyada Roobka waxaa ay u diyaaar-garoobaan fatahaad uu sameeyo Wabiga Shabeelle, gaar ahaan marka ay Roobabku si xiriir ah uga da’aan dhulka sare ee Itoobiya.
Guddiga doorashada Jubaland garabka uu magacaabay Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe ayaa isbadal ku sameeyay jadwalkii hore ee doorashada.
Qoraal maanta kasoo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in 17-ka bishan ay dhici doonto doorashada guddoonka baarlamaanka cusub halka doorashada Madaxweynahana ay dhici doonto 19-ka bisha.
Waxaa sidoo kale maanta magaalada lagu dhaariyay 75-ka xildhibaan ee cusub ee Jubaland ee garabka ay soo magacaabeen guddiga ay taageersan yihiin mucaaradka.
Dhinaca kale, waxaa maantaa magaalada gaaray wafdi ka socda AMISOM iyo Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay inay dowladda mamnuucday Qashin la sheegay in lagu shubi jiray garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cadde.
Warqad ka soo baxday xafiiska ra’iisul wasaare ku-xigeenka ayaa loo diray wasiirka gaadiidka iyo duuliska hawada,xafiisyada AMISOM iyo Qaramada Midoobay.
Waxaa kalo lagu caddeeyay qoraalka in uu kordhay qashinka dhex yaalla garoonka diyaaradaha ee Muqdisho,isla markaana aan la aqbaleyn laga billaabo 1-da bisha soo socota ee July in qashin lagu shubo garoonka.
Waxyaabaha laga mamnuucay in lala galo madaarka caalamiga ah ee Aadan Cadde ayaa waxaa ka mid ah, haraadiga daawooyinka, agabyada gubtay iyo qashinka burta ah.
Madaxa sare ee arrimaha dibedda ee Midowga Yurub, Federica Mogherini ayaa maanta booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho.
Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Mahad Cawad Ciise, iyadoo intaa kaddibna loo galbiyay xarunta madaxtooyada Soomaaliya halkaa oo ay kula kulantay ra’iisal wasaare Xassan Cali Kheyre.
“Waxa aan maanta kulan la qaatay Wakiilka Sare ee Arrimaha dibadda iyo Siyaasadda Amniga Midowga Yurub, Marwo Federika Mogherini, waxaa aan ka wada hadalnay horumarka aan ka sameynay howlaha dib-u-habeynta hay’adaha dowladda iyo kaalinta Midowga Yurub ee howlaha dowladda Soomaaliya hor yaalla sanadkaan 2019 ayuu yiri ra’iisul Wasaare kheyre.
Midowga Yurub ayaa ka mid ah ururada ugu waaweyn beesha caalamka ee taageera Soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa sannadkii hore ansixiyey lacag dhan 116 milyan oo dollar oo ah lacag lagu taageerayo miisaaniyadda Soomaaliya, waxayna ahayd markii ugu horraysay ee taasi ay dhacdo 27 sano.
Midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay goor dhow soo wada saaraan war-murtiyeed ku saabsan safarkaasi iyo qodobada laga hadlay.